बरिष्ठ पाइलट विजय लामाको मर्मस्पर्शी खुला पत्र रवीन्द्र मिश्रलाई |
Blogs सोमबार, २३ फागुन, २०७३
बरिष्ठ पाइलट विजय लामाको मर्मस्पर्शी खुला पत्र रवीन्द्र मिश्रलाई
तिमीले अहिलेसम्म आफ्नो पेशाबाट पुर्याएको योगदानलाई साधुबाद । जहिले सत्यको पक्षमा बोल्यौ, लड्यौ र सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्रका लागि समर्पित भएर काम गर्यौ ! आफ्नो विशिष्ट अनुभव र बुझेका सांसारिक ज्ञान र निर्दिष्ट तत्वबोधहरु निर्धक्क भएर पस्क्यौ !
कहिले डग्मगाएनौ आफ्नो प्रगतिशिल विचारहरु राख्न । आफ्नो आवाजलाई कहिले दबाएनौ गरिब दु:खीको लागि बोल्नलाई होस या भ्रष्टाचारी बिरुद् बोल्नलाई ! सँधै एकै रफ्तारमा अघि बढ्यौ ।
अतितकालीन रत्न-राज्यका हाम्रा किशोरकालीन दिनहरुदेखि आज पर्यन्त त्यही रवीन्द्र नै पाएँ । मैले परिष्कृत तर कुनै परिवर्तन बिनाको । त्यही सरल स्वभाव, त्यही नेतृत्वदायी भाव, त्यही मिठो मुस्कान, त्यही हठरहित शान्त मिलनसार र गम्भीर मिजास, अनि त्यही सहयोगी मन र त्यही जुझारु ब्यक्ति जसले अन्याय सहन सक्दैन थियो र सकेन कहिले पनि ! तिमी पत्रकारितामा छउञ्जेल पित-पत्रकारितालाई पैतालाले कुल्चिरह्यौ । तर आज यसरी तिमीले सफलताको गगन गमन गरिरहेको पेशालाई छोडी अन्यौल, अब्यवस्थित, फोहोरी, लुब्ध र अँध्यारो नितान्त भिन्न जगतमा पाइला चाल्ने तिम्रो निर्णयलाई स्वागत गर्दछु । यस कारण कि तिमी जस्तोको खाँचो छ । त्यहाँ जहाँ निस्वार्थ, निश्पक्ष र निडर लिडरको खडेरी छ् !
तिम्रो त्याग, आँट र स्वप्निल दुस्साहसको कदर गर्छु ! अझ चुनौतीपूर्ण र प्रतिबद् देश विकासप्रतिको तिम्रो समर्पणका लागि सलाम छ मेरो मित्रलाई । तिमीले बोल्दै गरेको "खान पुगोस-दिन पुगोस" जस्ता सामन्ती शब्दावली र "भष्टाचारीलाई किरा परोस" खालका दैवीक श्रापभन्दा माथी उठेर "खान नपाउनेलाई खान पुग्ने युग हाम्रो गन्तब्य" र "भ्रष्टाचारी जेलमा सडोस"को संकल्प नयाँ पुस्ताले तिमीबाट अपेक्षा जो गर्छ गरिरहेछ । सच्याउने छौ । यस्ता अर्थहिन नाराले तिम्रो वौद्धिकतालाई गिज्याएको छ।
म पनि त्यही अपेक्षा राख्छु । आज नेपालमा खाचो भनेको नै एउटा असल, इमान्दार, देश भक्त नेता हो ! यहि तिमीबाट देशले प्राप्त गरेर कायापलट भैदियोस, केवल एउटा ब्यक्तिले ल्याउन सक्छ परिवर्तन पुरै पार्टी या ठुलो जमात चाहिन्न ! नेता एक कार्यकर्ता अनेक ! आफूभित्र भएको सबै सदगुणलाई ब्यवस्थित गर्दै सुदुरगामी यात्राका लागि मेरो शुभ-कामना र सबै भएर पनि केही नभएको देशलाई मात्र "सबै भएको" देश बनाउने महायात्राको थालनी गरिदेउ । दैनिक ३ हजारभन्दा ज्यादा युवाको सस्तो र जोखिम-युक्त श्रमबजारमा पसिना घोट्नुपर्ने बाध्यात्मक विदेश गमनलाई यहीँ रोजगारी सृजना गरेर रोकी देउ, बृद्धहरुको लागि दुई गाँस जाउलो र न्यानो बास उपलब्ध गराइ देउ, युवा जमातलाई सिप र शिक्षा पाउने आधार खडा गरिदेउ र विशेष गरेर नारामा मात्र भ्रष्टहरुको बिरोधमात्र होइन, बृहद नेपाली शब्दकोषबाट भ्रष्टाचार नामको शब्दै डिलिट गरिदेउ ।